Waqtiga Lagu Bixiyay Natiijooyinka Khibradda Isticmaalaha ee Iibka Sare | Martech Zone
Xukunka Warbixinta Sahaminta Khibradda Isticmaalaha, oo lala kaashaday Maxay yihiinDo - tijaabin isticmaalka internetka iyo barta cilmi baarista khibrada isticmaalaha - ayaa banaanka soo dhigtay tiro koob.
74% ganacsiyada waxay rumeysan yihiin in khibrada isticmaale ay fure u tahay hagaajinta iibka, beddelaadda iyo daacadnimada.
Waa maxay Khibradda Isticmaalaha?
Sida laga soo xigtay Wikipedia: Khibrada isticmaale (UX) waxay ku lug leedahay shucuurta qofka ee ku saabsan adeegsiga badeecad, nidaam ama adeeg gaar ah. Khibrada isticmaale waxay muujineysaa khibradaha, saameynta, macnaha iyo qiimaha dhinacyada isdhexgalka-kumbuyuutarka aadanaha iyo lahaanshaha sheyga.
In kasta oo aanan gabi ahaanba ku raacsanayn qeexitaanka, haddana meheraddu waa inay eegto khibradda adeegsadayaasha waxoogaa yar oo maadiyan ah. Maaha oo dhan ku saabsan adeegsadaha, waxay ku saabsan tahay iswaafajinta baahidooda himilooyinkaaga iyo bixinta macluumaadka, naqshadeynta iyo hagidda si loo daboolo farqiga.
Qiyaaso muhiim ah oo adiga kugu habboon si aad ula socoto bartaada Khibradda Isticmaalaha:
Heerka Is-beddelka - Waa maxay boqolkiiba dadka imanaya goobtaada oo runti u beddelaya hoggaan ama iib? Ma fulisay yoolalka ku jira Falanqayntaada qiimayn si loo fiiriyo inay sii kordhayso iyo in kale
Heerka Boogga - Waa imisa tirada dadka soo booqda ee soo gaaraya goobtaada oo markiiba iska taga? Tani waxay tilmaan u tahay degel laga yaabo in aan lagu hagaajin karin raadinta iyo arrimaha bulshada ... sidaas darteed dadka soo booqanaya waxay la imaanayaan iyagoo rajeynaya macluumaadka ay halkaas ka heli doonaan laakiin markaa ma helayaan. Haddii ereyada furaha u ah ee iyaga wadanayaa ay khuseeyaan, markaa dhibaato kale ayaad haysataa providing macluumaadka aad bixinaysid ma aha wax qasbaya oo adigu kuma mashquulineysid waddo loo beddelayo.
Waqtiga Goobta - Caadi ahaan, qof waqti badan ku bixiya bartaada ayaa u muuqan doona inuu si qoto dheer ugu mashquulsan yahay, tilmaame inay iyagu yihiin hoggaan wanaagsan oo loo rogi karo (cabirkaagu wuu kala duwanaan karaa!). Maxaad sameyneysaa si aad si qoto dheer uga qeybgeliso booqdayaasha? Ma haysaa fiidiyow? Wargeysyada Daraasado Kiis ah? Blog? Bixinta macluumaad kala duwan oo kiciya ka qayb qaadashadu waa furaha.
Waana iyada oo aan la sheegin in Khibradda Isticmaalaha ay si aad ah ugu tiirsan tahay naqshadeynta bartaada, isku-darka astaantaada oo dhan, iyo bixinta dhexdhexaadinta iyo macluumaadka ay martidaadu u baahan yihiin.
Mararka qaarkood, waayo-aragnimada isticmaale ee liidata waxay noqon kartaa wax yar sida helitaanka lambar taleefan si loola xiriiro meheraddaada. Waxay noqon kartaa adeegsiga farta iyo barta cad ee dhib ku ah akhriska. Waxay noqon kartaa calaamadeynta iyo naqshadeynta xirfadeed ee bartaada iyo haddii ay u siineyso adeegsadaha heer guud oo aaminaad iyo xirfad-yaqaanimo ah. Iyo, inta badan maahan, waxay noqon kartaa jahwareer suuq-ku hadal taas oo ku adkeyneysa booqdayaashaada inay fahmaan haddii xalkaagu xal u noqon karo dhibaatooyinkooda iyo in kale.
Ha dhayalsan saameynta khibradaada isticmaale. Haddii aad shaki ka qabto, tijaabi. Haddii aadan awoodi karin adeeg, ka dib qabso dhalinyaradaada ama xaaskaaga si aad uhesho dareenkooda. Waad la yaabi kartaa.
Tags: heerka cigtayoolalka ganacsigaheerka beddelkasuldaanimoxarfahaAnalytics googleyoolalka gorfaynta googlemacluumaadKordhinta Iibkawaqtiga goobtakhibrada isticmaalahabaahiyaha isticmaalahacadcad